Real Madrid oo markaan ku soo biirtay bartilmaameedka Kooxaha Man United iyo Chelsea ee Jadon Sancho – Gool FM
(Madrid) 03 Juun 2020. Kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa markaan ku so biirtay tartanka xiddiga bartilmaameedka u ah Manchester United iyo Chelsea ee Jadon Sancho sida wararku ay sheegayaan.
Garabka kooxda Borussia Dortmund ee Sancho ayaa muddo dheer la la xiriirinayey inuu 100 milyan oo gini ugu dhaqaaqayo Kooxda Manchester United, halka sidoo kale naadiga Blues ay xiiseynayso.
Haatan Kooxda ka dheesha horyaalka La Liga ee Real ayaa ku soo biirtay tartanka loogu jiro saxiixa 20-sano jirkaan, laakiin waxay ku tiirsan yihiin kooxaha kale inaysan u dhaqaaqin xagaagan, sida laga soo xigtay Jariiradda AS.
Taasi waxa ay ka dhigan tahay in Los Blancos ay saxiixa Sancho u dhaqaaqi doonto sanadka 2021-ka haddii ay ku guuldarreystaan Kooxaha haatan ku tartamaya ee Man Utd iyo Chelsea.
Cinwaanka bogga hore ee Warsidahan Spanish-ka ah ayaa Saaka oo Arbaco ah lagu soo qoray jumlad u aqrismeysay: ‘Iska ilaali Sancho.’
Kooxda Zinedine Zidane ayaa lagu soo warramayaa inaysan awoodi doonin inay lacagta ku qarash-gareyso Sancho dhowr bilood gudahood.
Sancho ayaa hoosta ka xariiqay tayadiisa markale xilli ciyaareedkan, isagoo dhaliyey 17-gool oo cajiib ah, isla markaana sameeyey 16 caawin 27 kulan oo uu horyaalka Bundesliga u ciyaaray Kooxda Dortmund, iyadoo goolashaas ay ku jiraan sadaxleey goolal ah oo uu ugu shubay Naadiga Paderborn isbuucaan.